FBC - Huccuun maqaa Tajaajila Elektiriika Ityoophiyaatin gara biyyaa seene qabame
Huccuun maqaa Tajaajila Elektiriika Ityoophiyaatin gara biyyaa seene qabame
Finfinnee, Waxabajjii 6, 2010 (FBC) Huccuun konteenara lama ragaa maqaa Tajaajila Elektirika Itiyoophiyaatiin qophaa'een gara biyyaa seene Loogiyaa irratti too’annoo jala oolfame.
Abbaa-taayitaa Galiiwwanii fi Gumuruukaatti Hoji-geggeessaan Damee Gaalaafii Obbo Tasfaayee Ayyalaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti hordoffii fi too’annaa dheengadda halkan sa’aatii 9 irraa jalqabee geggeeffameen kaleessa sa’aatii 7 irratti qabameera.
Obbo tasfaayeen abbaan-qabeenyaa mi’aa fi sirni eyyama haa darbuu kan itti galmaa’e tajaajila Elektirikaa itiyoophiyaan ta’us qaami mi’a kana galche biraa ta’uu ibsaniiru.
Poolisiin konkolaachisaa too’annoo jala oolchee, qaama fichisiise akka eeru kennu qorannoon irratti geggeffamaa akka jiru himaniiru.
Mi’i kun eeruu hojileen maqaa dhaabbilee gara-garaan ragaalee qopheessuun mi’oota biyya keessa galchuu baay’ataa akka jiran abbaa-taayitichaa qaqqabeen hordoffii ji’oota sadiif geggeffameen too’annoo jala oolofamuusaa ibsaniiru.
Oduuwwan Biroo « Rakkoolee nageenyaa Hawaasaa fi Walqixxeetti uumamaniin namaa fi qabeenyaa irra miidhaan qaqqabe: Koomishinii Poolisii Naannoo Kibbaa	Barattootni qabeenya barbadeessuu irraa of qusachuu qabu: Yuunvarsiitii Bahaar Daar »
Oduuwwan Jimaata Galgalaa Waxabajjii 15 2010.